Ny fomba fiainan'ny fianakavian'i Ranivoson sy Pauline ny andavanandrom-piainany mandritra ny COVID | UNICEF Madagasikara
Ny fomba fiainan'ny fianakavian'i Ranivoson sy Pauline ny andavanandrom-piainany mandritra ny COVID
13 Aogositra 2020
Ranivoson, Pauline ary ny zanak'izy ireo dimy dia monina ao amin'ny Fokontany Lazamasy, any amin'ny Kaominina ambanivohitra Anoloka, distrikan'i Vohipeno, atsimo atsinanan'i Madagasikara. Na dia vitsy aza ny trangana Covid-19 ao amin'ity distrika ity dia voahaja tsara ireo fepetra fihibohana napetraky ny governemanta.
Pauline, mpanamboatra harona, ary ny vadiny tantsaha, dia mbola mandeha miasa isan'andro ihany mba hamelomana ireo zanak’izy ireo dimy, na eo aza ny fepetra famerana mifandraika amin'ny Covid-19. Mipetraka hatrany ny tahotra ho tratran'ilay otrik’aretina ka hamindra amin’ny ankizy. Toy ny mpivarotra rehetra manerana ny nosy manoloana ity valan’aretina ity, ny varotra eny an-tsena dia ahitana fitotongana mafy dia mafy. Samy miaiky noho izany izy mivady fa misy fiantraikany lehibe amin'ny vola miditra isan'andro ho an'ny fianakaviana izany toe-javatra izany.
Rehefa nanambara ny governemanta fa nosokafana indray ny sekoly ho an’ireo mpianatra manala fanadinana dia nihaotra izy ireo ny handefa ny zanany lahy kilasy fahasivy hiverina an-dakilasy, tsy noho ny tahotra ny fahasalamany ihany, fa noho ny fahasahiranan'izy ireo ara-bola ihany koa.
Soa ihany ho an'ilay fianakaviana fa i Juloce sy ny rahavaviny roa, Marcelline sy Martina, dia afaka nisitraka ny fanohanana avy amin’ilay tetik’asa fandefasana vola avy amin’ny UNICEF. Ity programa fandefasana vola ity izay nahazo famatsiana ara-bola avy amin’ny Let Us Learn (LUL) dia manome vola fanampiana ho an'ireo fianakaviana marefo manana ankizy mianatra any amin'ny sekoly ambaratonga faharoa, 11 ka hatramin'ny 18 taona, mba hahafahan’izy ireo manohy fianarana.
Noho izany toe-javatra izany dia i Juloce irery ihany no niverina nianatra nandritra ity vanim-potoanan’ny valan’aretina ity, mba hiomanany amin'ny BEPC ary hahafahany miditra any amin’ny lysea. Ireo rahavaviny efatra aloha hatreto dia mbola mijanona ao an-trano.
Araka ny toromarika avy amin'ny governemanta, ny CEG Lazamasy izay ianaran’i Juloce dia nametraka fepetra sakana isan-karazany toy ny fanasan-tanana alohan'ny hidirana an-dakilasy, fanaovana arovava ary ny fanajana ny elanelana 1 metatra mandritra ny fampianarana sy eny anelanelan’ny ora fianarana. Ary noho ireo vola fanampiny avy amin’ny LUL, dia mahazo toky kokoa ny ray aman-dreny, toa an'i Juloce izay nahatsiaro ho maivamaivana ihany koa.
"Satria voafetra ho 10 fotsiny ihany izahay ao an-dakilasy mandritra ny tapak’andro ary tsy maintsy manao arovava ny rehetra, dia tsy matahotra ny handeha any an-tsekoly intsony aho," hoy i Juloce.
Noho ny vola fanampiny voarain'izy ireo sy ny paikady fanaovana tahiry izay nianarany tamin'ny alàlan'ny tetik’asa fandefasana vola, dia afaka nanangona vola izy ireo ary nampiasa vola tamin'ny fiompiana akoho. Asa iray hafa izay mampidi-bola izany mba hanampy ny ankohonana hanana hery bebe kokoa eo anatrehan’izao fotoan-tsarotra izao. Ankoatr'izay, na eo aza ny fepetra fiobohana dia nisitraka hatrany ilay fandefasana vola in-droa isam-bolana izy ireo, izay nanampy azy ireo hiatrehana ny tsy fisian'ny fidiram-bola sy hamaly ny filàn'ny fianakaviana amin’ny lafin’ny sakafo sy fidiovana.
Na dia nisy fiatraikany teo amin'ny fiainany andavan'andro aza ny valan’aretina, dia nanana fanantenana hatrany ity ankohonana ity. "Mandalo ihany izao", hoy izy ireo tamin'ny zanany. "Mandroso miadana hatrany izahay. Notazominay sy nampiharinay tsara ireo fahazarana tsara azonay tamin'ny alàlan'ny tetik’asa fandefasana vola LUL, ary tena mankasitraka izany izahay. Manangom-bola izahay ary miomana amin'ny trangan-javatra tsy ampoizina toy izao mitranga aminay ankehitriny izao. Mitady asa fanampiny hatrany izahay mba hahazoana fidiram-bola fanampiny.
Tena tia sy mankafy mianatra ny zanakay ka ezahanay ny mba tsy hamerenan’izy ireo kilasy mihitsy,” hoy i Pauline.
Noho ny fanohanan'ny Fikambanana Susan & Stefan Findel ho an'ny UNICEF Madagascar, ankizy mitotaly 8.766 (6.143 amin'ny ambaratonga faharoa ary 2 633 amin'ny kilasy fahadimy) (51 isan-jaton’izy ireo dia zazavavy) no nisitraka ny fandefasana vola mba hanohanana ny fampianarana ambaratonga faharoa (ao anatin'izany ny any Vohipeno) ho an'ny taom-pianarana 2019/2020.
Tantara nangonin'i ANDRIMIHAZA Philippe, Fandaharan’asa Tahiry miasa ho an’ny Fampandrosoana (FID), nosoratan'i Solofonirina Claudia RAKOTOARISON, UNICEF MADAGASCAR.